မတန်ခူးချစ်သူက ချိုသင်း ချစ်သူလဲ ဖြစ်လို့နေ..
(ကွန်ပျူတာက အသံမရလို့ ပုံလေးတွေ အသေအချာ ကြည့်ပြီး လွမ်းသွားတယ်)
အစ်မချစ်သူဆိုလို့ ပြေးလာကြည့်တာ ချစ်စရာ ရှူ့ခင်းလေးတွေး)
အေးချမ်းလိုက်တာ... အေးအေး ဆေးဆေး ကြည့်သွားပါသည်။
ဓာတ်ပုံလေးတွေ ကောင်းတယ် အစ်မ။ လွမ်းစရာ။ အသံမပါဘူးနော်။
ဓာတ်ပုံတွေ မြင်ရတာ မြန်မာပြည်ကို တကယ်လွမ်းတယ် အမရေ.. :)
အခုတစ်ခေါက် ရိုက်လာခဲ့တာလား တန်ခူး...လွမ်းဖို့ကောင်းလိုက်တာနော်..။ အဲလိုလေး မှတ်တမ်းတင်ထားပြီး တင်ပေးလို့ကျေးဇူးနော်..။ အဲဒါ တန်ခူးချစ်သူ..မြန်မာပြည်သူ ပြည်သားတွေရဲ့ ချစ်သူ ဖြစ်မယ်ထင်ရဲ့။
*** ဘလော့ဂ်အတွက် ခေတ်မှီနည်းပညာတွေ တော်တော် တတ်နေပြီပေါ့လေ...
အခုမှ ကြည့်လို့ရသွားတယ်။း)
တီးလုံးလေး လိုနေတယ်။ အခု ဖြည့်ပေးသွားတယ်။
(အိုလေးလေး ဖော်မဆုံ..ဧ..ဧရာဝတီ.).နေခြည်...ထိုးးးးးဘုရားစေတီ...စစ်ကိုင်းတောင်..ဧရာ ကမ်း---လှဆီ.....
microsoft movie maker မှာ လေ အမ
အမ ၁၅ရက်နေ့ညကပြန်ရောက်ပါတယ်ခင်ဗျ။ စာတွေနောက်မှပြန်လာဖတ်ပါဦးမယ်။
သုတ်သုတ်လေးကြည့်လဲ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် မမရေ…
ဧရာဝတီချစ်သူတွေပေါ့ချိုသင်းရယ်… အမအသံမထည့်ထားဘူးညီမရေ… လုပ်ကလဲ သိပ်မလုပ်တတ်တော့ အငြိမ်လေးပဲ ကောင်းပါတယ်ဆို ကိုယ့်ကိုယ်ကို နှစ်သိမ့်လိုိက်တာ…
အမချစ်သူက ဧရာဝတီလေ မောင်မျိုးရဲ့…
ပုံရိပ်ရေ… အသံကို နောက်တခါ ကြိုးစားကြည့်မယ်နော်…
ပေါက်ရေ… စစ်ကိုင်း၊ ပုဂံက မေမြို့ နဲ့ ကပ်လို့ လေ… နောက်တခါဆို သွားခဲ့နော်…
မ ရေ… လူတယောက်နဲ့ မြစ်တစင်းကြားက ချစ်ခြင်းတရားကို နားလည်ပေးတာ ကျေးဇူးပါနော်…
ကေရေ… ဖွင့်လို့ ရသွားပြီလား….
ဟုတ်တယ် မ ရေ… ဒီတခေါက်ပြန်တုန်းက ရိုက်တာ… တန်ခူးချစ်သူ မြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေချစ်သူ ဧရာဝတီလေ…
အလွမ်းပြေလိုပြေငြားပေါ့သက်ဝေရယ်… နည်းပညာမဟုတ်ပါဘူး… သက်ဝေသိပြီးသားဖြစ်မှာပါ.. တွေ့ ရင်ပြောပြမယ်နော်…
ကေရေ… အဲဒီသီချင်းလေးကြိုက်တယ်.. ဘယ်က သွားရှာရမလဲဟင်…
ရွာသားလေးရေ… ပျော်ခဲ့မှာပေါ့… ခုတော့လွမ်းနေမှာပေါ့…
ကောင်းကင်ကိုရေ… အလွမ်းပြေစေရယ်လို့ ဆိုမှ ပိုလွမ်းသွားတယ်နော်… ဟုတ်ပ….